Hirshabelle oo markii ugu horeysay yeelatay miisaaniyad ay ku shaqeyso - BANDHIGA
Lamaane Soomaaliyeed oo qoray Buugaag wax tar u leh caruurta Soomaalida. "Ma u dayaarisay caruurtaada noolasha berrito"-Ereyga Gudniinka Fircooniga Miyuu Dhab Ahaantii Soo Saarayaa Turjubaanka Saxda ah ee Gudniinka FGMka ?-Is Gudniinka Fircooniga really the correct Somali translation of FGM/C?-Dab ka kacay garaash ku yaala isgoyska KM ee magaalada Muqdisho-Soomaaliya oo keensatay Sheybaarka lagu baaro qofka qaba cudurka COVID-19-Halkee ku dambeesay gogashii dib u heshiineed ee madaxweynaha Puntland uu fidiyay?-Coronovirus oo saameyn dhaqaale ku yeeshay Kalluumeysatadii Kalluunka u dhoofi jiray Dibadda-Mareykanka oo wajahayaha xaaladii ugu xumeyd ee Coronovirus
Hirshabelle oo markii ugu horeysay yeelatay miisaaniyad ay ku shaqeyso
Waxaa maanta Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay meel mariyeen Miisaaniyad-sanadeed cusub oo maamulka ku shaqeyn doono sanadka 2020-ka, waana miisaaniyaddi ugu horeysay ee maamulku yeesho tan iyo markii la aas-aasay.
Golaha baarlamaanka dowlad gobaleedka Hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee Jowhar oo uu shir guddoominayey guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee baarlamaanka Cabdi Xuseen Geedi, waxaana soo xaadiray 51 mudane oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Golaha ayaa meel mariyey miisaaniyad-sanadeed gaareyso toban iyo afar milyan, toban kun sagaal boqol siddetan iyo afar dollar (14,10984.000 Us). Taas oo maamulka uu ku shaqeyn doono sanadka 2020.
Kulanka lagu meel mariyey miisaaniyadda ayaa waxaa ka maqnaa guddoomiyaha Baarlamanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed isaga oo maalmahaan ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Miisaanad-sanadeedka maanta uu meel mariyey baarlamaanka dowlad gobaleedka Hirshabeelle ayaa waxaa uu noqonayaa miisaniyaddii ugu horeysay oo maamulka uu yeesho tan iyo markii la aas aasay.
Maxaa iska badalay nolosha Muqdisho kadib cudurka Coronovirus ee dunida saameeyay?
Halkee laga keenay Jaadka sida qarsoodiga ah maanta lagu soo geliyay Muqdisho?